ECN Lacagta Ganacsiga | Waxtarrada ka timaadda ECN / STP Ganacsi Lacageed leh FXCC
Home / About / Ku saabsan FXCC / Mashruuca Ganacsiga
Maaddaama ECIC forex macmiilka FXCC uu leeyahay Meelna ma lahan qodob. Habka ganacsigeenu wuxuu ku saleysan yahay Qaabdhismeedka Dhaqdhaqaaqa (STP) ee shabakad elektaroonik ah, waxaanu tixraacaynaa tan oo ah nooca ganacsiga ECN / STP FX. Nidaamka Ganacsi ee ECN / STP waa jawi halkaas oo dhammaan amarrada macaamiisheena loo diro hay'ado maaliyadeed oo tartan ah iyo kuwo aqoon leh, si loo waafajiyo. Baaskiiladahan ururada la ixtiraamo waxay abuurtaa ballanqaadka bixiyeyaasha xisaabta. Tani si toos ah, toos ah oo loo marayo falanqaynta, waxay tirtiraysaa suurtogalnimada qiimo kasta ama faafinta faafinta, iyada oo hubinaysa inaan waligeed jirin wax khilaaf ah oo u dhaxeeya FXCC oo ah macmiil iyo macaamiisheena.
FXCC waxay aaminsan tahay in haysashada bixiyeyaasha soodhada badani ay ka mid yihiin adeegyada aasaasiga ah ee aan u soo bandhigi karno macaamiisheena suuqa suuqyada sii kordhaya. Sidaa awgeed waxaannu dhisnay xiriir adag oo leh hay'adaha maaliyadeed ee ugu caansan, la ixtiraamo oo la abuuro, si loo hubiyo in dhammaan macaamiishayadu ay ka faa'iidaystaan ​​inta badan faafin tartiib tartiib ah 24-5, xitaa inta lagu jiro xaaladaha suuqa ee aan isbeddeleyn iyo marka xogta muhiimka ah iyo daabacaada la daabaco.
Qalabka FXCC Price Aggrego si joogta ah oo si toos ah u baadha dhammaan Bid / Weydiiso (iibsato oo iibiya) qiimaha galaya Nidaamka ECN oo si joogta ah u muujiya isku-dhafka qiimaha ugu fiican ee bixinta bixiyeyaasha dhammaan bixiyeyaasha xisaabta. Tani waxay hubisaa in macaamiishayadu ka faa'iidaystaan ​​cayaaraha ugu fiican ee Bid / Askada qiimaha laga heli karo nidaamka ganacsi ee forex. Farsamadan qiimaheedu wuxuu abuuraa jawi xirfadeed oo ganacsatada ah wax kasta oo khibrad ahaan ah oo ay bixiyaan baaxad dheeraad ah oo loogu talagalay ganacsi faa'iido leh.
Soo koobida qaabka ganacsiga FXCC.
FXCC waxay macaamiisheeda siisaa macaamiisheeda si toos ah ufiirinta qulqulaha ECN, taas oo dhammaan macaamiisha ay helaan helitaan isku mid ah, isla suuqyada dareeraha ah, halkaas oo ganacsiyada si dhakhso ah loo fuliyo, iyada oo aan wax dib loo dhigin, ama dib u soo celin.
Si ka duwan sidii loo xakameyn lahaa wada xaajoodka, FXCC maaha dhinaca kale ee ganacsiga macmiilka. Kama iibin karno macmiilka: amarrada, joojinta ama xaddidaadda iyo dhamaan ganacsiyada macmiilka ayaa si toos ah dib loogu dhigi doonaa dhinacyada iska soo horjeeda ee kooxdayada bixiyeyaasha xisaabta.
Dhaqannada adoo adeegsanaya nooca ECN / STP waxay ku suganyihiin qarsoodi, bixiyeyaasha dakhligeena oo kaliya waxay arki karaan amarrada ka imaanaya nidaamka FXCC.
Fursada joojinta ugudbinta luminta, ama faafinta ballaarinta waa la tirtirayaa.
Maaddaama aan loo baahnayn in loo isticmaalo sifo sharci darro ah, ma jiraan wax khilaaf ah oo xiiseynaya macaamiisheenna. Ma jiraan wax shuruud ah oo aan inoo hayno, sidaas darteed marnaba ma jirrabo in aan ka ganacsan karno macaamiisheena.
Qiimeeyn shaksi ah iyo faafin tartiib tartiib ah.
Bixinta mashaariicda ganacsi ee ugu casrisan.
Halkan FXCC waxaan aaminsanahay in macaamiishayadu ay tahay inay dhammaantood helaan qalabka ganacsiga ee forex Ganacsatada guuleysta waxay ubaahan yahiin ujeedadooda. Tusaale ahaan, waxaan siinaa macaamiisheena forex ee aan helno MetaTrader 4 software forex.
Baaskiilkayaga ECN ee noo gaarka ahi wuxuu noo ogolaanayaa inaanu ku deeqno macaamiisha, kuwaas oo aad u yaqaan MetaTrader, ikhtiyaarka ah inay sii wadaan isticmaalkooda mashiinka forex ganacsiga gudaha ECN / STP.